ကျွန်တော့်ချစ်သူ လေယဉ်မယ် ( ကြွားစိန်လုပ်ခြင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျွန်တော့်ချစ်သူ လေယဉ်မယ် ( ကြွားစိန်လုပ်ခြင်း )
ကျွန်တော့်ချစ်သူ လေယဉ်မယ် ( ကြွားစိန်လုပ်ခြင်း )
Posted by sorrow on Sep 30, 2013 in My Dear Diary | 46 comments
သူမသည် ကျွန်ုပ်အတွက် လမင်းလဲ ဖြစ်သလို ..ထိခိုက်ကြေကွဲလွယ်သော ပန်းတပွင့်လဲဖြစ်သည် ။
သူမ အဘယ့်ကြောင့် လေယဉ်မယ်အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားသနည်းကားမပြောတတ် ။ ထိုမျှပင်ပန်းဆင်းရဲသည့် အလုပ်ကို နှစ်သက်သဘောကျသော သူမကို တစိုးတစိမျှနားမလည်ပါ ။
Terminal အတွင်းကျော့ကျော့မော့မော့ လမ်းလျောက်ခွင့်ရသော တခဏကို သာယာသလောကား မသိ ။ နားအလွန်ပူမည့် မျိုးစေ့တစ်စေ့ကို သူမ စိုက်ပျိုးခဲ့စဉ်က ကျွန်ုပ် အိပ်မျှပင်မပျော်ခဲ့ပါ ။ ယခင်ကတဲက သူမသည် လေယဉ်မယ် ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်သည် ။
Crew Bag လေးဆွဲပြီး လမ်းလျောက်သွားသော သူမကို အမှတ်မထင်မြင်မိသည့် ခဏတွင် နှလုံးသွေးတို့ ရပ်မတတ်ကြည်နူးမိပါသည် ။ ချစ်ခြင်းသည် ပျံသန်းနိုင်သည့်အတောင်ပံတစ်စုံကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့လျှင် သူမ..လေယဉ်ပျံနောက် တကောက်ကောက် ပျံသန်းပြီးစောင့်ရှောက်လိုက်ချင်ပါသည် ။
“” အရမ်းချောတာပဲ သဲလေးရယ် “” အပြောတွင် …
ပါးစပ်မပိတ်ပဲ “” တိဒယ် “” ဟု ပြောတတ်သည့် သူမကို ကျွန်ုပ်လွန်စွာမြတ်နိုးပါသည် ။
“” ဇက်ကြောတတ်တယ်…ခြေထောက်ညောင်းတယ် ..လက်ဆစ်နာတယ် …ခေါင်းကိုက်တယ်…နားအူတယ် “” အနှီဖက်တီးမလေးတွင် ကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းမှ ရှိသေးရဲ့လား ဟု ထင်ရလောက်အောင်ပင် ညောင်တတ်သော သူမက …စီနီယာများကို တစ်သံ ..ကျွန်ုပ်ကို တစ်သံ ဆက်ဆံတတ်သောသူဖြစ်ပါသည် ။
ဤမှခန့်ညား သားနားသော ကျွန်ုပ်ကို ချစ်စနိုးခေါ်တတ်သော အမည်နာမကား …. “” သောက်ကောင်မ “” ဟူသတတ် :
ချစ်သူနဖူးလေးကို ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သည် ..ကျွန်ုပ်မျက်နှာ ရှုံ့လိုက်သည် ။ မျက်နှာလွဲလိုက်သည် ။ ခေါင်းခါလိုက်သည် ။
“” ဟင် ..ဘာအရသာမှလဲမရှိဘူး “” ဤမျှသာ ပြောလိုက်မိပါသည် ။
တုံ့ပြန်ပုံလေးက သင်းပါသည် ။ ညိုသကျည်းပူကနဲဖြစ်သွားလေသည် အဟီး ။
ငါးပေငါးလက်မခန့်တွင်မှသုံးလက်မ ဒေါက်ဖိနပ် စီးတတ်သော သူမ နှင့် ယှဉ် လျှင် ငါးပေကိုးသာရှိသော ကျွန်ုပ်မှာ ဂျကောင်ပု ဖြစ်နေသော်လည်း သူမဘေးနားတွင် ရှိခွင့်ရသည့်အခိုက်အတန့်အတွက် …သေလောက်အောင်ဂုဏ်ယူခဲ့ရပါသည် ။
” ရှင် ”
” ဟင်…သောက်ကောင်မားးးးးးးး.” ရင်ခေါင်းထဲမှ ထွက်လာသောအသံ ဖြင့် ကျုံးအော်သည် ။
( Good morning ladies & Gentle man ဟူသော announcement ရွတ်သည့် လေသံချိုချိုလေး ဘယ်နားရောက်လို့ဘယ်ပေါက်သွားမှန်းမသိ အဟီး)
ဆောင့်ဆောင့်….ဆောင့်ဆောင့်နှင့် …အလိပ်လိပ်ထွက်နေသော..ဒေါသ၏ သင်္ကေတ…..ကိုမြင်ယောင်ပါသည် ..အနားမှာရှိရင်တော့ မလွယ်
အလံလုပွဲ ထိုးရမည်မှာသေချာပါသည် ။
သွယ်လျနေသော လက်ချောင်းလေးများက တဆတ်ဆတ်တုန်ရီလျှက် အမှုန့်ကြိတ်ချင်နေလောက်ပါပြီ
အဟီး သူမသည် စိတ်တိုနေလည်း..လှပါသည် ။
View all posts by sorrow →
ပါးပြင်က ဘာ ဥ က အက်နေတာတုန်းဟမ်?
ဟို ခေါ်သံ အရောက်မှာ ဖတ်ရတာ အားရချက်ကယ်။
ပါးပြင်မှာ သွေးကြောစိမ်းလေးတွေမြင်ရတဲ့အထိ နုနုဖတ်ဖတ်ဖြူဖြူဥဥလေးဖြစ်တာကိုပြောတာဂျ….ဦးကြောင်ကြီးပြောသလို ..လျှာကြီးနဲ့ ရှလွတ် …အာဟိ ….
အင်းးး စိတ်တိုနေလည်း လှတယ်ဆိုတော့
တစ်ခုလောက် မေးရဦးမယ်ဗျာ ..
ဒါမယ့် ကပ်ထိုးလေး မေးရမယ့် မေးခွန်း …
အခြားသူတွေ မကျိနဲ့ …
ခညား သည်းလေး အီးအီးတန်းလန်းနဲ့ အိမ်သာထဲ ထိုင်နေရင်ရော လှဒလားငင်င်င်)
လိင်ယဉ်မယ်ဒေဂဒေါ့ ဘယ်လိုကျိကျိ တောင့်တယ်ဖျောင့်တယ်
ထင်းရှူးပုံးလိုလို bagအိပ် ကို ဘီးတတ်ပြီး ဆွဲဝင်လာတဲ့
လိင်ယဉ်မယ်တေ တစ်အုပ်ကြီးကို တွေ့တဲ့အခါ အတော်ကျိလို့ကောင်းတယ်
ဥပမာ သူတို့လိင်ဗျံက မြန်မာပြည်ကနေအမေဒိဂန်ကို သွားတယ်ဆိုရင်
ကွမ်းယာတို့ လက်ဖက်သုတ်တို့ အိပ်နဲ့အပီထည့်ပြီး
ဘါဘဲဖြစ်ဖြစ် လေယဉ်မယ်ဆို ကျုပ်က အားကြီးကြိုက်တယ်
ဘပု ..လာမန့်တယ်လား ….အဟီး ..ပျော်တာ့ …ဘပု ..သူတို့ထင်းရှုးသေတ္တာပုံးထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟာတွေပဲပါရသတဲ့ .. အဲ့မျိုးဟာတွေ သယ်လို့ရဘူးဆိုတာ သူတို့ Code of Conduct မှာပါတယ်တဲ့…နောက်တစ်ခုက သူတို့ ကြိုက်လောက်ပါတယ်..ဘပုကို …တားတားအောင်တွယ်ပေးမယ်…အဟီး
အဲ့ချို နာမည်လဲရအောင်လေ…လဲမားးးးး အပျိုကြီး …အာဟိ
အတော်လှမယ့်ပုံပဲ။ ဟိုကလည်း ကိုဆောရိုးကြီးကိုပြန်ကြိုက်တယ်ပေါ့။ ဟိ ဘလိုင်းကြီးရန်စတာ
ခီညားတို့စုံတွဲ…ကျုပ်ကို ရန်ညိုးများထားနေသလား…ဟင်….ဟိုကောင်လေးကလဲ နာ့ကိုအိမ်သာထဲချောင်းခိုင်းတယ်…အဲ့ရာကောင်းလား …ပြောပါအုံး..အဲ့ရာကောင်းရားးးးးး
အဲ့ရာ ကောင်းဒယ် … ဒဲ့ …
ကိုဂျီး ပေါဒါ မီဟုတ်ဘူးနော် ညီငေးးး
အားကျမခံ ထုတ် ကြွားတာပေါ့လေ
နောက်ခါ တွေ့ရင် အဲလိုခေါ်မယ်လေ
တဂျား နီ ၀ဋ်လည်မယ်နော်….ငွင်းငွင်း ငွင်း…..
လည်စရာလား တောက်ကောင်မ ရဲ့
အောင်မြတ်လေး အားကျမခံကြွားစ့်ကုန်ဂျဘာဘီလား။ ဟီးခေါ်လို့တော့အတော်ကောင်းမယ် အိုဘာဒဲ့ တောက်ကောင်မားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မမသဲနုအေး…အသဲယားလွန်းလို့ …အဟီး ….မျက်လုံးလေးပြူးသေးတယ်…ဗားရှင်းအမှန်က …အဟီး
လေယာဉ်မယ် အလုပ်က ရေရှည်လုပ်ဘို့ ကန့်သက်ချက် (အသက်၊အိမ်ထောင်….) တွေရှိတော့
လုပ်ဖြစ်ရင်တော့လဲ အ၀တ်အစား အနေအထိုင် အပြောအဆိုမှာတော့ အဆင့် တစ်ခုထိ ပြောင်းလဲ သွားလို့
ဟုတ်ပါ့ ကိုကြီး နိုဇိုမိရာ…ဒီစာချုပ်ကုန်ရင် မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးဗျာ …ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးပဲ တူတူလုပ်တော့မလားလို့ …..
သူရို့ရည်းစားတွေ အတော်ကံကောင်းမှာလို့ချည်း ထင်နေတတ်ခဲ့တာ..။
ကိုအမတ်မင်းရေ ….နားတော့ပူသဗျာ …ချစ်တော့လဲ ..သည်းခံရတာပါပဲဂျာ…အဟီး
ရှေးကတော့ လေယဉ်မယ်တွေဆိုတာ.. ယောက်ျား(တရားဝင်)မယူရဘူး…ဆိုလား..။
လေယဉ်မယ်အကြောင်းပြောကြရင်.. ရှေးမဆလခေတ်က..လေယဉ်ပျက်ကျပြီးဆုံးသွားတဲ့..လေယဉ်မယ် “ပေါက်ပေါက်”ကိုအမှတ်ပြန်ရမိတယ်..
ကျောက်စ်တို့ အလုံသူ အန်တီသွယ်သွယ်ဝင်း ရှိသေးတယ်လေ…
“မိုးထက်မြင့်သည့် စိတ်ထားများ”ဆိုပြီး စာအုပ်တောင်ထွက်သေးတယ် သဂျီးရဲ့…
ဘာဒဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးလှိုင်ဆိုလားပဲ ငယ်ငယ်ကသီချင်းလေးကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်လားမသိ
ဟုတ်ပါ့ သူကြီးရယ်…ခုတော့ အဲ့လို သတ်မှတ်ချက်တော့မရှိပေမယ့် .. အိမ်ထောင်ကျရင် များသောအားဖြင့်က မလုပ်ကြတော့ပါဘူး ..ကလေးမယူရဘူးလို့တော့ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်….ယုတ်မာလိုက်ပုံများ….အဟင့်ဟင့် …
လေယာဉ်စပါယ်ယါ ဆိုလို့ အရှေ့ကျွန်းကအပြန် ပြည်ကြီးဝင်ပြီး air china ပေါ်ကဇာတ်လမ်းလေးဗျ လေယာဉ်ပျံတက်ပြီ ၁၅မီနစ်လောက် အကြာထင်တယ် လေယာဉ်ငြိမ်သွားပြီးနောက် လေယာဉ်စပါယ်ယာ မလေးက မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရင်(ဒီလို….ဒီလို ကွကွ..ကိကိ)နဲ့အသက်ကယ်အင်ကျီနဲ့ သရုပ်ပြနေတာဗျ။ ဆိုတဲ့အခိုက် ကျွနုပ်ရှေ့ကမောင်ရင် တစ်ယောက်က စွေ့ကနဲ ကင်မလာနဲ့ လှမ်ချိန်လိုက်ပါလေရော နဂိုမှုံညိုနေတဲ့ မျက်နှာထားဟာ ဝုန်းဆိုပြိုကြ လာပါလေရာ စပါယ်ယာမလေးပြောပါတယ် ဖုန်းခနဲ အသက်ကယ်အင်ကျီ ပြစ်ချပြီ စွေ့ခနဲကိုယ်ဖေါ့ ပညာသုံး လိုက်သလို အနှီးသကောင့် သားအနား ချက်ချင်းဆိုသလို ရောက်လာပါလေရော (မဟုတ်ရင်လွဲရော)ရှောင်လင်ကျောင်းဆင်းမျာလား သို့ကလိုရောက်လာပြီ လက်တစ်ဖက်ခါးထောက်လျှက် ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် မျက်လုံးထဲထိုးမိမတတ် @#$%&^(*) ကွိကွီကွကွာဘာတွေပြောမှန်မသိ အနှီးကင်မလာမန်းခမြ ခေါင်းခါခါ ခြေခါခါ ဖြင့်ရေရွတ်လျှက် နနီမိုနိင်း ဟူသောစကား သံကြီးကြားမိမှ ဂျပွန်ကြီးဖြစ်နေတာကိုး စပယ်ယာ မလေးက သူပုံကို ကင်မလာထဲက ဖျက်ခိုင်းနေတာများ ကြောက်ဖို့တောင် ကောင်းတယ်။
ကွန်မြူနစ်လေယဉ်မယ်မလေးတွေကိုများ ဒါ့ပုံ ရိုက်ရဲသေးတယ်…အဟိဟိ..လူမိုက်နှယ့်….အနီးဆုံး ပို့တ် မှာ ဆွဲမချခဲ့တာ ကံကောင်း….ကို joe wynn ရယ်…အဲချိုင်းနားဆိုတော့ကာ ..ဆန်ပြုတ်ကလေးနဲ့ ကြက်ဥပြုတ်ကလေးနဲ့ .ရေဘူးပိစိလေးနဲ့ ..on board မှာကျွေးတာ စားကောင်းခဲ့ရဲ့လား ..အဟီး ဟီး …
” အဲချိုင်းနားဆိုတော့ကာ ..ဆန်ပြုတ်ကလေးနဲ့ ကြက်ဥပြုတ်ကလေးနဲ့ .ရေဘူးပိစိလေးနဲ့ ..
on board မှာကျွေးတာ စားကောင်းခဲ့ရဲ့လား ..အဟီး ဟီး ”
Air China တော့ မသိဘူး ။ တမြန်နှစ်က တရုတ်ပြည် Tour သွားတုန်း ၊
China Eastern Air Line နှင့် China Southern Air Line စီးဖူးတယ် ။
ကျွေးတာတွေ မဆိုးလှပါဘူး ။
မင်းကို မှန်း ကြည့် ရတာ
မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ပါစေ ဆုတောင်း နဲ့ အနှိပ်စက် ခံ ရမဲ့ ဇာတာများ ပါနေလား ဟယ်။
တွေ့သူတိုင်း က ကန်လိုက်၊ ခေါက်လိုက် နဲ့။
ခဏခဏ မစနဲ့ လေ..သူမကြိုက်တာကို..။ ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ မစနဲ့ပေါ့…ဥ အက်နေတာလေးကိုဘဲ….
ဘာဂျီးနဲ့ ဆိုလား… အဲ့လိုလုပ်လေ..။
စာရေးကလည်းကောင်း အပြောကလည်း ကောင်းတော့
ဒီခလေးမ သောက်ကောင်မဒူးဝါးလေး ကို ကြွေတာပေါ့… သောက်ဒူးဝါးမရဲ့ …။
အဟီးဟီး ..ဦးခေါင်ပြောတာလေး ရီချင်တာ့ ..အဟီးဟီး
လာပြန်ပြီးနောက်မောင်ကြွားတစ်ယောက် :)) .. အရှေ့တောင်အာရှကစတုတ္ထမြောက်ချစ်တတ်ဆုံးပေါ့.. ကြည့်ရတာဒီလောက်လဲဝပါဘူးဟယ်.. အော်..ဒါပေမယ့် ဘယ်နှယောက်မြောက်ကိုရည်ညွှန်းတာလဲဟင် :mrgreenn:
တုတ်ထိုးရောင်းနေတယ်..အားဘူး..လေယဉ်နောက်မလိုက်နိုင်ူဘူး ..လူရက်စက်မကြီးရဲ့ …ဒချိဒချိ
လေယာဉ်မယ်လေးကို ပိုင်ထားတော့လည်း ကြွားလောက်ပါပေတယ်။
တားတားက ကွကိုယ်အေးဆေးနေတာ..အန်တီမမရဲ့ .သူက တိုးခွေ့ဝင်လာလို့ ခေါင်းလေး ယောင်ပြီး ငြိမ့်မိတာ…..( ယနေ့ ပါးယားနေတီ အဟီး )
မြန်မာ ပိုင် လေကြောင်းလိုင်းတွေ မှာ ၊
မြန်မာ လေယာဉ်မှူး Pilot / Capt တွေ ၊
လစာ ဘယ်လောက်ရကြသတုန်းဗျ ။
၅၀၀၀ နှင့် ၁၀၀၀၀ ကြားရှိတယ်လို့ကြားတယ် ။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က MAI ရဲ့ ၊
Japan Direct Flight မှာ လေယာဉ်မှူး Pilot လုပ်နေတယ် ။
ဘဖော …Domestic လေကြောင်းကတော့ 3000 နဲ့ 5000 ကြားလောက်ပဲထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ လောလောဆယ်အထိတော့ MAI က ဂျပန်ကို Schedule flight တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ ။ ဘဖောသူငယ်ချင်းက Charter Flight မှာ လုပ်နေပုံပါပဲ ခင်ဗျာ ။ သူတို့က တော့ Airbus ကြီးတွေမောင်းရတော့ 10000 ကနေ 15000 ကြားရမယ်ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ အရင် လုပ်ဖူးတဲ့ ကုလားလေကြောင်းက ပိုင်းလော့တွေကတော့ အဲ့လောက်ပါပဲခင်ဗျာ ။ သူတို့က လစာအပြင် Flying hour နဲ့ ထပ်တိုးရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ ။
http://www.aviationinterviews.com/pilot/airlinepayrates.html ဘဖော..အဲ့ရာမှန်တယ်တော့ ပြောကြတာပဲဗျ
” လောလောဆယ်အထိတော့ MAI က ဂျပန်ကို Schedule flight တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ ။
သူတို့က တော့ Airbus ကြီးတွေမောင်းရတော့ 10000 ကနေ 15000 ကြားရမယ်ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ”
ဟုတ်တယ် သူက Airbus မောင်းတဲ့သူ ။ ပြင်သစ်မှာ သွားတက်ထားတာ ။
အခုတောင် သူ ဂျပန် ရောက်နေတယ် ထင်တယ် ။ Face Book မှာ တွေ့တယ် ။
ကို နို ကို မေးကြည့်တာတော့ 8000 လောက်ရမယ် ထင်တယ်လို့ ပြောတယ် ။
သင်္ဘော ကပ္ပတိန် နှင့် လစာ ၊ နိုင်ငံခြား ရောက်တာချင်း အတူတူလောက်ပါပဲ ။
Pro = သာမီး ချောချော အပျိုလေးတွေ နှင့် နေ့တဓူဝ တွဲနေရတယ် ။ မိုက်ထှာ ၊ ဟီ ဟိ ။
Con = သင်္ဘောမှာလို Life Boat / Life Jacket ( လေထီး ) မပါဘူး ။
အဘ က ရေ နဲနဲ ကူးတတ်ပေမယ့် ၊ လေ မကူးတတ်ဘူးရယ် ။
ငယ်တုံးက ရူးခဲ့တဲ့ထဲ လေယာဉ်မယ်လဲ ပါသပေါ့လေ…
မမအိရယ်…ရမ်းပင်ပန်းပါတယ်…လုပ်ချင်ပါနဲ့ဂျာ…သူကလေးခဗျာ …၀ါသနာပါလွန်းလို့ရယ်..Flight ကတစ်ခေါက်ဆင်းလာရင် ယဲ့ယဲ့ကလေး ဖြစ်နေရော …အဟင့်…ရင်ဆို့တယ်ဂျာ….